ပျိုမဒီတို့နဲ့သင့်တော်လိုက်ဖက်မယ့် Concealer ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့…. | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပျိုမဒီတို့နဲ့သင့်တော်လိုက်ဖက်မယ့် Concealer ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့….
ပျိုမဒီတို့နဲ့သင့်တော်လိုက်ဖက်မယ့် Concealer ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့….
မျက်နှာပြင်ပေါ်ကဖုံးဖိလို့မရတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကြောင့် ??? လူတောမတိုးရဲလောက်အောင် စိတ်ညစ်နေတဲ့ပျိုမဒီတို့အတွက် ?????? သတင်းကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။ တင်းတိပ် ၊ မှဲ့ခြောက် ၊ အမာရွတ် ၊ ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေ အဝေးကိုဒိုးပြီး ယုံကြည်မှုခြေလှမ်းအပြည့်နဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ဖို့အတွက် Cosmetic Myanmar ကနေ Essence Cosmetic ကထုတ်တဲ့ Concealer လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ??? Essence Cosmetic ကထုတ်တဲ့ Concealer Type တွေကတော့ Liquid Type , Cream Type , Stick Type , Pen Type , Mousse Type , Cream to Powder Type , Color Correcting Type ဆိုပြီး Types မျိုးစုံရှိတာကြောင့် ပျိုမေတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံး Type လေးကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ???
❤️?? All I need Concealer Palette ???
ဒီ Concealer လေးကတော့ Cream Type ဖြစ်ပြီး Palette တစ်ခုထဲမှာပဲ အစိမ်း ၊ ပန်းရောင် ၊ အညို ၊ အသားရောင် ၊ အဝါရောင်ဆိုပြီး အရောင်(၅)မျိုးထည့်သွင်းထားတဲ့5in 1 Palette လေးဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်လေးကတော့ဝက်ခြံဖု၊နေလောင်ကွက်၊သွေးကြောနီလိုနီမြန်းမှုတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ပန်းရောင်လေးကတော့မျက်ကွင်းညိုသူများအတွက်အသားရောင်နဲ့တွဲဖက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အညိုရောင်နဲ့အသားရောင်ကတော့ပျိုမဒီတို့ရဲ့အသားအရောင်နဲ့ချိန်ညှိပြီးအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။အဝါရောင်လေးကတော့အမည်းစက်လေးတွေကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
❤️?? Essence Stay Natural Concealer ???
ဒီ Concealer လေးကတော့ထိပ်မှာနူးညံ့တဲ့ Air Brush လေးပါတဲ့ Pen Type ဖြစ်ပါတယ်။ Vitamin-E ပါဝင်လို့ မျက်ကွင်းညိုခြင်းနဲ့အသားအရေမညီညာခြင်းတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ပါးပါးကြည်ကြည်လေးဖြစ်လို့ သုံးလို့အရမ်းကောင်းပြီး Highlight အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။
❤️?? Stay All Day Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ Cream Type လေးဖြစ်ပြီး ၁၆နာရီအထိတာရှည်ခံပါတယ်။ အရမ်းမပျစ်လို့အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ပျိုမဒီတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကို တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့အသွင် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
❤️?? Camouflage Cream Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ Cream Type ဖြစ်ပြီး အမဲစက် ၊ အမာရွတ်တွေကို အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပြီး အရောင်နုနဲ့အရင့်ဆိုပြီး ၂ရောင်ပါဝင်တာကြောင့် ပျိုမဒီတို့အသားအရောင်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အရောင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
❤️?? Soft Touch Mousse Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ Mousse Type လေးဖြစ်ပြီးတော့အလယ်အလတ်ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Matt Finish လေးဖြစ်လို့ အဆီပြန်တဲ့ပျိုမဒီတို့အတွက် အဆင်ပြေသလို ပါးပါးကြည်ကြည်လေးဖြစ်လို့ မျက်နှာပြင်လေးကို သဘာဝဆန်ဆန်လေးနူးညံ့ချောမွေ့စေပါတယ်။
❤️?? Get Picture Ready! b. Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ ထိပ်မှာဖော့လုံးလုံးလေးပါလို့ အလယ်အလတ်ကနေ အပြည့်အဝအထိဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် Liquid Type လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Brighten effect ပါဝင်လို့မျက်ကွင်းတဲ့ပျိုမဒီတို့အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
❤️?? Pure Nude Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ အမြင့်မားဆုံးဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Cream to Powder Type Stick Concealer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Brush နဲ့ယူပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပိုမိုသင့်တော်ပြီး အပြစ်အနာအဆာဖုံးအုပ်ရာမှာ မရွေ့စေတာကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။
❤️?? Color Correcting Liquid Concealer ???
ဒီ concealer လေးကတော့ အစိမ်းရောင် ၊ ပန်းရောင်နဲ့ အဝါရောင်တွေပါဝင်ပြီး Liquid Type လေးဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်အသုံးပြုပုံလေးကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်။
❤️?? Camouflage Full Coverage ???
ဒီ concealer လေးကတော့ အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Liquid Type လေးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကွင်းညိုတာနဲ့အသားအရေမညီညာသူတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး ပွဲတက်မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်သူ ပျိုမဒီတို့အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တယ်နော်။
ကဲ…..ပျိုမဒီတို့အသည်းစွဲပြီးသား Brand ဖြစ်တာကြောင့် အရည်အသွေးကတော့ ပြောနေစရာမလိုပါဘူးနော်။ ပျိုမဒီတို့နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး Concealer လေးကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
Image Source : www.facebook.com/essencemyanmar
GLAMGLOW Supermud Mask နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ကြမယ်ဟေ့
အမဲစက်နဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို အပြည့်အဝ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် Odbo Nude Makeup CC cream!